Shirka London oo diiradda lagu saaray ammaanka iyo gargaarka Soomaaliya - BBC News Somali
Magaalada London waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay marti gelineyso dowladda Britain. Madaxda ka qeybgashay shirka ayaa si weyn uga hadashay xaaladda ammaanka Soomaaliya iyo sidii Soomaaliya looga caawin lahaa inay si buuxda ula wareegto masu'uuliyadda ammaankeeda.
Ra'iisal wasaaraha Britain, Theresa May ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay iskaashi dhaw oo ku aadan qaabka loo wajahayo dhismaha ciidan qaran oo ay Soomalaiya leedahay.
'' Heshiiska dhinaca amaanka ee aan halkan ku soo bandhigayno waxa lagu salayn doonaa heshiiskii taarikhiga ahaa ee ay dhowaan gaareen dowlada Federaalka iyo maamulada ka jira dalka oo ka heshiisyey tirada ciidanka, halka ay ka hawlgeli doonaan, maalgelintooda iyo cidda hagaysa'' ayay tiri, ra'iisal wasaaraha Britain.
Shirka ayaa lagu taageeray qorshaha mustaqbalka lagu doonayo in ammaanka Soomaaliya ay si buuxda uala wareegeen ciidan qaran oo ay Soomaali leedahay. Qorashaha ay AMISOM hawlaha ammaanka ugu warejineyso ciidammada Soomaaliya aya ala sheegay inuu billaabmi doono dhammaadka sanadka 2018ka.
Britain ayaa dhawaan magaalada Baybdho ka billaabi doonto barnaamij ay ku tababareyso ciidammada qaranka Soomaaliya.
Isku Taga Imaaraadka ayaa lagu wadaa inuu isna dhiso xarun casri ah oo lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya,
Maraykanka wuxuu tababarayaa oo uu qalabaynayaa ciidmada Danab,
Turkiga ayaa isagana wada tababaridda siinaya sarakiisha ciidanka soomaliya.
Lahaanshaha sawirka Kenyatta
Image caption Kenyatta ayaa ku baaqay in la kordhiyo ciidammada AMISOM
''Cunaqabteynta hubka ee sanadooyinka badan saaran Soomaaliya, waxay caqabada ku noqotay oo ay aad u xayirtay awoodda aan u leenahay in aan soo iibsano hub culus, inkastoo ay jiraty in si qeyb ahaan cunaqabateyntaas la qaaday 2013-kii'', ayuu yiri madaxweynaha.
Madaxweyno Farmaajo wuxuu sidoo kale sheegay in abaaraha dalka ka jira ay barakiciyeen ilaa 600,000 oo qof tan iyo bishii Nofembar ee 2016, wuxuuna ugu baaqay caalamka in laga hortago in dalka ay ka dhacdo xaalad bani'aadanimo iyo sidoo kale in diiradda la saaro sidii looga soo kaban lahaa abaarta.
Daawo: Waxyaabaha looga hadlayo shirka London
Dowladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka go'antahay in ay ka hortagto in Soomaaliya ay macaluul ka dhacdo, ayna ku baaqeyso in la kordhiyo kaalmada bani'aadanimo ee Soomaaliya.
Image caption Abaarta Soomaaliya waxaa ku barakacay qoysas badan oo xoolo dhaqato ahaa.
Hay'adda dhallaanka u qaabilsan Qarmada Midoobey ee UNICEF ayaa sheegeysa in qiyaastii 1.4 milyan oo carruura ah ay hayso nafaqadarro amaba ay qarka u saran yihiin xaalad nafaqadarro.